Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Faallooyinka tubada Musqusha Delta: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta Musqusha
2021 / 05 / 13 QoondayntaTilmaamaha qasabada 5615 0
Musqushaadu waa goolal aad ku nasato kalinimada. Waa baxsad hagaajineysa nolol maalmeedkaaga, waxayna xitaa kordhin kartaa qiimaha iibka gurigaaga. Shay kasta oo qolka ka mid ah ayaa saameyn ku yeelan doona dareenka iyo qaabka aad u abuureyso. Taasi waa sababta marka tayada iyo sharraxaadda ay muhiim u yihiin, qasabadaha musqusha Delta ay keenaan.
Doorashada qasabadda musqusha waxay ka baxsan tahay awoodda lagu shido biyaha. Waxay ku saabsan tahay ku darida shaqada iyo qaabka mid ka mid ah qolalka ugu muhiimsan guriga.
U adeegso tusahan Dib-u-eegista Qasabadda Delta Musqusha si aad u sahamiso qaar ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya ee qasabadda musqusha.
Musqusha Musqusha Delta Sare: Xulashadayada 2021
Qasabada saxda ah waxay ku siineysaa muuqaalka ugufiican adoo khibrada ka dhigaya mid sahlan oo sahlan sida ugu macquulsan. Haddii aad ugaarsi ugu jirto qasabaddaas saxda ah, hubi xulashadeena ugu sarreysa tubbada musqusha Delta ugu wanaagsan
1. Casriga Musqusha Qolka Musqusha ee Casriga ah
Muuqaal casri ah wuxuu ku saabsan yahay nadiif, xariiqyo jilicsan, iyo jawiga ka wanaagsan ee aad ku leedahay musqushaada marka loo eego nadaafadda? Waxaad ku adkaan laheyd inaad heshid qasabado badan oo leh muuqaal ka casrisan Casriga Hal Hole ee Musqusha Musqusha 567LF-PP.
U qalmida WaterSense
Isku-soo-baxa bullaacad-bulsheed ayaa lagu daray
Hawl-qabasho keli ah
Muuqaalka ugu caansan ee qasabadani wuxuu noqon karaa hawlgalkiisa oo keliya. Way fududahay in la helo heerkulka biyaha ee saxda ah ee aad u baahan tahay taas oo muhiim u ah markaad wajigaaga dhaqayso gaar ahaan. Gacanta kaliya ayaa sidoo kale fudud in la maareeyo haddii gacmahaagu wasakh yihiin ama aad isku dayeyso inaad ka caawiso carruurta yaryar inay gacmahooda dhaqaan.
Qasabadani waxay sidoo kale uqalaneysaa astaanta Delta ee WaterSense sababtoo ah dhowrista biyaha. WaterSense tubooyinka ayaa isticmaala qiyaastii 20% biyo ka yar kuwa caadiga ah.
2. Lahara Fiditaanka 3-dalool ee Musqusha Musqusha
Lahara wuxuu ka mid yahay qasabadaha musqusha ee Delta ugu caansan, wuxuuna ku yimaadaa qaabab kala duwan. Waxay kuxirantahay qaabka aad rabto iyo qaabeynta miiska dushiisa ama wax aan waxba tarayn, Lahara Widepread 3-Hole Bathroom Faucet 3538-CZMPU-DST waxay noqon kartaa taam kufiican.
Teknolojiyada Khatimidii Dheeman
Khadadka saadka ee InnoFlex PEX
Loogu talagalay in lagu rakibo saddex dalool oo baahsan
Hawl laba-qabasho ah
Naqshadeynta caadiga ah ee 'Lahara' waa mid xariif ah musqusha kasta, oo ku habboon qaab kasta oo qurxin ah. Tayada had iyo jeer waa mudnaanta koowaad ee Delta Faucet, in kastoo, iyo Laharadu ma niyad jabto.
Qashin-qubkaani wuxuu ka kooban yahay shaabadda Delta oo ah nooca loo yaqaan 'Diamond seal' iyo khadadkooda wax soo saarka ee InnoFlex PEX, oo dhammaantood loogu talagalay in looga hortago daadinta isla markaana looga caawiyo qasabaddaada inay sii dheeraato In kasta oo qaabkani ku dhowaad ku xidhan yahay qasabadda ugu qaalisan ee liistadan, haddana waa maalgashi aad filan karto inuu sii socdo sannado badan.
3. Qasabada Musqusha ee Xarunta Lahara
Waxaad jeceshahay qaabka Lahara laakiin waxaad horey u rakibtay miiska musqusha oo wuxuu leeyahay qaabeyn seddex god leh, oo aan aheyn mid baahsan. Nasiib kama tihid, maxaa yeelay Delta waxay leedahay Lahara Centerset Bathroom Faucet 2538-CZMPU-DST sidoo kale.
Moodelkan Centeret wuxuu leeyahay dhammaan qaabka Lahara iyo astaamaha aad taqaanid ee aad jeceshahay laakiin leh qaabeyn ku habboon rakibaadda afar inji. Delta waxay rakibida ka dhigeysaa mid aan hagaagsaneyn sida ugu macquulsan iyadoo lagu daro isku imaatinka bullaacadaha iyo sidoo kale khadadka isku dhafan ee qasabada leh.
In kasta oo Delta Teknolojiyada Dheeman ee Delta aysan u gaar ahayn qasabaddan gaarka ah, haddana waa muuqaal mudan in laga hadlo. Qalabka saxda ah wuxuu soconayaa kudhowaad laba jeer illaa inta qalabka caadiga ah ee qasabadaha kale, waxaad filan kartaa in iibsashadaadu ay sii socoto.
4. Qasabada Musqusha ee Hal-Xarafka Trinsic
Tilmaame-yaasha Hal-godka ah ee 'Trinsic Single-Hole Faucet' waa tusaalaha ugu habboon ee naqshadeynta casriga ah. Iyada oo isku dhafan oo ah walxo naqshad casri ah iyo dhaqameed, iyada oo aan lagu xusin dhismaheeda fudud ee tayada sare leh, tuubadaani waa xulashada ugu habboon ee musqusha kasta.
Koontaroolada qalabka dhoobada dhoobada dheeman-ku-dhegan
Shirka daxalka u adkaysta
Waxaa lagu heli karaa shan dhameystir
Waa la ogyahay in qasabadaha Delta loo dhisay inay waaraan, laakiin Trinsic wuxuu isku daraa dhowr ka mid ah hal-abuurnimadooda ugu horumarsan, tayo sare leh. Khadadka saadka ee 'Innoflex PEX' waxay leeyihiin xoog iyo dabacsanaan si looga fogaado dildilaaca iyo daxalka halka cajaladaha dhoobada ah ee u gaarka ah ay soconayaan illaa laba jeer illaa celceliska warshadaha.
Dabcan, Trinsic kama maqna waaxda qurxinta. Naqshadeynta qurxoon waxay ku timaaddaa naxaas champagne, matte black, chrome, ahama, iyo naxaas Venetian ah si ay ugu habboonaato muuqaal kasta oo musqusha ah.
5. Qasabada Musqusha oo aad u Fidsan
Khadadka 'Trinsic line' ee qasabadaha waa mid ka mid ah waxyaabaha soo jireenka ah ee Delta, sidaa darteed waa wax lala yaabo in la siiyo ikhtiyaar milkiileyaal badan intii suurtagal ah, waxay leeyihiin labadaba hal god iyo seddex god. Qasnadda Musqusha ee baahsan ee loo yaqaan 'Trinsic Bathroom Faucet' waxay ku nooshahay dhaxalka magaceeda.
Waxaa lagu heli karaa chrom, naxaas Venetian, naxaas champagne, matte madow, iyo dhammaad aan lahayn
In kasta oo nooca god-godka ah ee naqshadda 'Trinsic design' ay ku habboon tahay wax-qabadyada yaryar ee isafgaradku yar yahay, haddana waxay u muuqan kartaa mid aan ku habboonayn waxyaalaha waawayn ee foosha xun iyo miisaska musqusha. Xaaladahaas, naqshadeynta baahsan ayaa ku habboon.
Tuubadaani waxay leedahay dhamaan astaamaha tayada sare leh ee aad kafilayso tuubada Trinsic, sida dhejiska dhoobada ah ee dheemanku kuxiranyahay iyo khadadka bixinta Innoflex PEX ee waara. Kaliya farqiga u dhexeeya waa qaabeyntiisa baahsan ee kaamil ahaanta muuqaalka musqushaada.
6. Tuubada Musqusha Nicoli oo Si Balaadhan Loo Fidiyay
Naqshad balaaran oo qasab ah ayaa bixisa xarrago gaar ah iyo caan ku ahaanshaha muuqaalka musqushaada, taas oo ka dhigaysa sharraxaadda qasabaddaas mid aad muhiim u ah. Haddii aad hiigsaneyso musqusha casriga ah ama casriga ah, Qasabada Musqusha Nicoli Widepread waa taam ku habboon.
Dherer dherer ah
Saddex-dalool rakibaadda baahsan
Isku darka bullaacadaha ayaa lagu daray
Naqshad casri ah
Saddex xulasho dhammayn
Qaab-dhismeedka baahsan ee tuubada ayaa fududahay in loo habeeyo sida adiga kuu gaarka ah. Xaqiiqdii, waxay ku habboon tahay wixii rakibid ah saddex-god oo ka bilaabma lix illaa lix iyo toban inji. Tuubada sidoo kale waxay la shaqeysaa khadadka wax soo saarka ee caadiga ah, laakiin maskaxda ku hay in khadadka sahayda aysan ku jirin markaa hubi inaad iibsatid taada mid gooni ah.
7. Haywood Qolka Musqusha ee Hal-godka ah
Tuubada dhaqameed ee musqusha ee leh qasabad iyo laba gacmood ma aha qof walba koobkiisa shaaha. Haddii aad rabto qasabad ka kooban isafgarad, Qasabadda Musqusha ee Hal-godka Haywood ayaa noqon karta riyadaada isku xidhka ah.
Tiknoolajiyada Diamond Seal
Haywood waxaa loo dhisay inuu waarto. Teknoolojiyaddeeda gaarka ah ee Delta-Seal ee loo yaqaan 'Diamond Seal' ayaa kaa ilaalinaysa inaad si xad dhaaf ah u daadato sannadaha soo socda Waxaa loogu talagalay in lagu rakibo hal dalool, in kasta oo qasabaddu ay la socoto saxan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah leh iyo sidoo kale in la dejiyo qaabeynta saddexda god.
Naqshadaynta quruxda badan ee Haywood waxay ku habboon tahay wax aan waxba tarayn oo musqusha leh. Waxaa lagu heli karaa chrome, ahama, ama Venetian naxaas ku dhammaatay. Si kastaba ha noqotee, maanka ku hay, si kastaba ha noqotee, inaad u baahan tahay nadiifin dheeri ah oo toos ah oo loogu talagalay qasabaddaan marka la barbardhigo inta badan sababtoo ah kabaalka hawlgalka ee dusha sare.
8. Qasabada Musqusha ee Xarunta Haywood
Inta badan qasabadaha ku jira liistadayada illaa iyo hadda waxay ku sugnaayeen meel casriga ah ama casriga ah. Haddii aad doorbideyso muuqaal dhaqameed ka badan, Haywood Centerset Bathroom Faucet Chrome 25999LF ayaa ku toosin doonta luuqdaada.
Haywoodku waa mid siyaabo badan u gaar ah marka la barbar dhigo qasabadaha kale ee musqusha Delta ee ku yaal liistadayada. Kuwa bilowga ah, waa ikhtiyaarka ugu dhaqaale ee kudhowaad 25% qiimaha moodooyinka heerka sare ee Lahara.
Marka lagu daro qiimaha soo jiidashada leh, Haywood ayaa ugu gaaban dhammaan qasabadaha ku jira liiskayaga. Xuubkiisu wuxuu dusha ka soo baxayaa 4.68 inji halka moodooyinka kale qaarkood ay ku dhow yihiin toddobo inji.
Qaabka ayaa ah sababta ugu sareysa ee milkiileyaal badan ay doortaan Haywood, in kastoo. Waxay leedahay muuqaal dhaqameed isku dhafan nalalka iyo gooladaha qulqulaya, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon musqusha leh dareen diirran oo diirran ama muuqaal Old Hollywood ah.
9. Lahara Single Hole Bleroom Musqusha
Musqulaha meelaha yar yar ama qolalka budada ah, rakibida hal-god ayaa caadi ah. Haddii aad u maleyneysay inay ka qaaday Lahara caan ah tixgelinta musqushaada, mar kale ka fikir oo fiiri Lahara Single Hole Bathroom Faucet 538-CZMPU-DST
Waxay ku habboon tahay rakibo hal-god ah ama saddex dalool leh
Sida aad filan karto, qaabkani waa nooc god keliya ah oo ka mid ah moodooyinka kale ee Lahara. Kala duwanaansho, hase yeeshe, waxay sidoo kale kujirtaa saxan ikhtiyaar ikhtiyaar ah ikhtiyaariga ah sidaa darteed waad u adeegsan kartaa haddii aad leedahay afar inji oo afar rakcad ah oo rakib ah
Waxaa jira dhowr arrimood oo gaar ah oo laga fiirsado tuubada sidoo kale. Marka hore, way ka dheer tahay moodooyinka kale ee Lahara oo ku dhowaad toddobo inji dherer ah. Hubso inaad cabirto booskaaga oo hubi in tubbada ay ku habboon tahay.
Qaab-dhismeedka Lahara wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu ku daro Touch2O teknolojiyad: Hal-abuurnimada Delta ee kuu oggolaaneysa inaad daarto oo aad demiso qasabadda adiga oo taabanaya gacantaada ama xusulka. Way ku habboon tahay dhaqidda gacmaha qasan iyada oo aan loo fidin tuubada lafteeda.
10. Tuubada Hal-godka Halbawlaha ah
Haddii aad raadineysid qasabad casri ah oo jaban, Tilmaamaha Hal-Xirmooyinka Hal-doorka ah ayaa ah xulashada ugu habboon musqushaada. Naqshadeynta xagalkani waxay leedahay muuqaal gaar ah oo run ahaantii ka dhigi doonta musqushaada inta ka hartay.
Pivotal wuxuu ka mid noqon karaa moodooyinka qaaliga ah ee liiskayaga ku jira, laakiin milkiileyaal badan oo hadda leh musqulo aysan indhaha ka qaadi karin, waa u qalantaa dinaar kasta. Qalabkan casriga ah wuxuu ku xiraa qurux badan cabirkiisa ku habboon iswaafajintiisa. Muuqaal la beddeli karo, waxaa sidoo kale laga heli karaa shan dhammeystir caan ah.
Dabcan, tayadu waa qayb muhiim ah oo lafdhabar u ah sidoo kale. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada Delta ee aaminka ah Diamond Seal, tuubadan ayaa loo dhisay inay socoto.
11. Aasaaska Tuubada Gacanta Keliya ah
Qof kastaa ma doonayo in qasabaddiisu ay qayb muhiim ah ka ahaato muuqaalka musqusha. Haddii aad si fudud u rabto qasabad aasaasi ah, shaqeynaysa, tayo sare leh, waxaad tahay musharaxa ugufiican aasaaska Qasabada Hal-Qabashada.
Qiimaha la awoodi karo
Laba ikhtiyaar oo dhammayn ah
Tuubada aasaaska waxaa laga yaabaa inaysan laheyn wax shub ah, laakiin uma baahna iyaga. Qaab-dhismeedka fudud ee tuubada iyo qaabdhismeedka isku-dhafan ayaa ka dhigaya mid ku habboon musqusha kasta, iyo qiimaha la awoodi karo ayaa sidoo kale faa'iido leh.
Si aad ugu fududaato, qasabada aasaaska waxay la timaadaa bulaacada pop-up-ka oo lagu daro. Waxaa loogu talagalay inay ku habboonaato saddex-god, afar-inji rakibidooda ah waxaana laga heli karaa labada chrom iyo ahama si loo kabo aragtida musqushaada.
Doorashada Qasabadda Musqusha Delta
Kuma khaldami kartid tuubada musqusha Delta. Haddii miiskaga dusha sare uu leeyahay hal-dalool, seddex god oo isku urursan, ama qaabeyn saddex-god ah oo baahsan, waxaa jira fursado ku habboon baahiyahaaga iyo qaabkaaga.
Noocyo dheeri ah iyo talooyin iibsi, kafiiri hageyaasha kale ee Delta Faucet 2021 hagitaan!
Hore:: Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka Next: 330㎡ Villa Fudud, Caddaan Caan Ah - Farshaxanka Goobta Aamusan | Wang Wuping
Muxuu qasabadeyda wali udaadinaayaa kadib markuu dansaday - waa la xaliyay
2021 / 07 / 23 936
Sida Loo Xulo Tubada Jikada Fiican - Hagaha Iibsashada Qasabadda Qasabadda
2021 / 07 / 21 1201
Sidee U Jiidaa Tuubbada Jikada Qasabadda?
2021 / 07 / 21 1108
Sida loo Helo Nambarka Moodada Delta Faucet - Tallaabo Talaabo
2021 / 07 / 20 1137
330㎡ Villa Fudud, Caddaan Caan Ah - Farshaxanka Goobta Aamusan | Wang Wuping
2021 / 07 / 19 867
2021 / 05 / 09 7186